Lavaka afo ivelan'ny trano hanomezana hafanana ny patio na zaridainanao | Bezzia
Maria vazquez | 13/05/2022 18:00 | Fitaovana ao an-trano
Nanolo-kevitra ve ianao tamin'ny faran'ny fahavaratra lasa teo fa amin'ity taona ity dia hanavao ny habaka ivelany ianao? Atombohy ny fampidirana ireo singa izay tsy manampy ny maha-izy azy fotsiny fa mahatonga azy ireo ho azo ampiasaina kokoa. Zavatra toy ny lavaka afo ivelany izay arosontsika anio.
Ny braziers no tena tadiavinao mba hahafahanao manitatra ny fotoana araraotinao amin'ny zaridainanao na patio. Izy ireo dia sary sokitra mandritra ny andro ary manao endrika ivelany mafana kokoa amin'ny alina mangatsiaka kokoa Ny fahavaratra. Ampifanaraho amin'ny habaka ivelan'ny tranonao ny habeny sy ny endriny ary manaova fiovana!
1 Antony hampidirana brazier amin'ny toerana ivelanao
2 Karazana brazier
3 Metaly misy endrika boribory
4 Vato bioethanol braziers
Antony hampidirana brazier amin'ny toerana ivelanao
Misy zavatra tsy ampy amin'ny habaka ivelan'ny tranonao? Indraindray isika dia manana izany fihetseham-po izany saingy tsy dia mazava loatra ny amin'ny zavatra tsy maintsy ampidirintsika mba hanjavona. Ny lavaka afo dia mety ho izay tadiavinao- Misy, mazava ho azy, antony maro tokony hampidirana azy amin'ny endrika ivelany ivelany:
Izany dia mamela ny manararaotra ny toerana ivelan'ny trano ihany koa ao amin'ny alina mangatsiaka indrindra amin'ny fahavaratra.
Hazavao ny patio sy ny zaridaina mandritra ny alina, manome hazavana akaiky sy mafana.
Lasa singa manodidina izay izy ireo manangona ny fianakaviana.
Manampy ny maha-izy azy sy ny hafanana izy ireo amin'ny famolavolana habakabaka
Ireo mandoro kitay na saribao Izy ireo dia azo ampiasaina ho toy ny giro. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny drafitra dia misy iray.
Azontsika sokajiana araka ny fitaovana nanaovana azy na ny bikany ny brazier. Nanapa-kevitra izahay, na izany aza, hiloka amin'ny hybrid manasongadina ireo karazana brazier malaza indrindra, na ireo izay ho mora kokoa aminao ny hahita.
Metaly misy endrika boribory
Amin'ny andro dia manao toy izany izy ireo sary sokitra ao an-jaridaina ary amin'ny filentehan'ny masoandro dia lasa brazier izy ireo, ka mahatonga azy ireo ho singa tonga lafatra handravaka ny terrace, patio na zaridainanao. Ny lavaka afo mifono vovoka mainty dia kanto amin'ny sehatra, na dia ireo endrika oxidized aza no mety indrindra hanodinana ny lohany ary hampidirana fikasihana avant-garde amin'io habaka ivelany io.
Ny braziers metaly misy endrika boribory dia mety indrindra amin'ny haingo toerana kely ivelany satria hahita endrika 51 santimetatra amin'ny savaivony ianao izay hanamora ny fampifanarahana azy amin'ireo. Mila, eny, toerana kely iray hafa hitehirizana ny kitay hodoranao ao anatiny ianao.
Tombontsoa iray hafa tokony hodinihina ny braziers metaly dia izy ireo azo idirana ara-toekarena; Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny € 150. Fanampin'izany, maivana kokoa noho ny safidy hafa izy ireo, izay ahafahanao manova toerana rehefa mila mampiasa azy amin'ny fomba hafa ianao.
Vato bioethanol braziers
Ny silhouette maoderina sy ny tsipika madio amin'ny lavaka afo vato dia hanampy fomba ho an'ny habaka ivelany rehetra, lehibe na kely. Ny fampiasana ny bioethanol ho solika, dia hahatonga ny fampiasana azy ho tsotra sy madio kokoa.
Azonao atao ny mahita an'io karazana brazier io endrika boribory na mahitsizoro. Ny teo aloha dia mahafinaritra indrindra amin'ny toerana ivelan'ny trano miaraka amin'ny atmosfera milamina sy mahazatra. Ny mahitsizoro voarakotra vato kosa dia manome endrika estetika kokoa.
Na inona na inona famolavolana azy ireo, ireo lavaka afo ivelany ireo dia feno vato samy mampiasa ny habeny sy ny lokon'ireo mba hilalaovana ny fomba. Ireo vato ireo dia natao hanafenana ny fandoroana izay, ankoatra ny biotenaol, dia afaka miasa amin'ny solika hafa. Ny ankamaroan'ny braziers dia manana fanombohana manual, saingy azo atao koa ny mahita azy ireo amin'ny fanombohana elektrika. Amin'ny vidiny firy? Ny iray, mazava ho azy, miavaka kokoa.
Ny ivelany vita amin'ny simenitra na vato, ireo braziers dia mavesatra noho ny metaly braziers. Ny lehibe kokoa dia natao hanana a toerana raikitra ao an-jaridaina, noho izany dia tsy maintsy mieritreritra tsara momba ny fomba hampidirana azy ireo amin'ny famolavolana ianao.
Dabilio mitohy sasany, sofa zaridaina na seza sasany mba hanodidina ny brazier ivelan'ny trano sy hanamboarana ny habaka ivelany. Tsy mila bebe kokoa ianao hankafy ny alina fahavaratra. Mialà sasatra amin'ny hazavan'ny volana na mandany fotoana miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana alina fahavaratra manodidina ny afo ary ny majikany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Fitaovana ao an-trano » Lavaka afo ivelan'ny trano hanomezana hafanana ny patio na ny zaridainanao
Greenwashing, fanao ara-barotra "maitso".